Nhau - Chinguva Fuel Kuchengeta Tangi reMining uye Zvekurima
Chinguva Mafuta Fuel Kuchengetera Tangi reMigodhi uye Zvekurima
Collapsible Fuel Kuchengeta matangi inzira inodhura yekuchengetedza zvinwiwa zvakawanda mupurazi remafuta kana nzvimbo hombe yekuchengetera nzvimbo. Kutakurwa kwakapetwa uye kuri nyore kuendesa, matangi edu anoshanduka ndiyo sarudzo yakanaka yekuchengetedza mafuta kwenguva pfupi panguva yekuchera migodhi, kugadzirisa pombi, mashandiro emauto, nezvimwe.
Matangi Anokwenenzverwa eMafuta Emafuta
Iwo anodonha akawanda emvura ekuchengetera matangi anopa zvakati wandei bhenefiti yemamwe akaomarara emvura ekuchengetera matangi. Mimwe mibairo inosanganisira:
Yakakura Kugona: Matangi anogona kugadzirwa nemagetsi anosvika mazana maviri emakumi marita, zvichibvumira hukuru hwekuchengetedza huwandu nemutengo wakaderera kwazvo.
Kukurumidza Kuendesa uye Kumisikidza Up: Matangi anochinjika anotumirwa akaputirwa, kuti ugone kugamuchira yakawanda panguva imwe uye wotanga chirongwa chako nekukurumidza. Kutumirwa kwavo nekukurumidza kwaitawo kuti vagadzirire mamiriro ezvinhu ekurumidziro.
Wide Yemamiriro ekunze Range: Matangi echinguvana ekuchengetera mafuta anoitwa kuti akwanise kumira munzvimbo dzakasiyana siyana.
Yakakwirira kana Yakaderera Mbiri Inowanikwa: Zvichienderana nezvako zvekushandisa, matangi anogadzirwa neepamusoro kana yakaderera profil yekubatsira kuzadzisa zvaunoda.
Matangi anodonha anoiswa munzvimbo yemafuta epurazi sezvinoonekwa mune yemuenzaniso dhizaini pazasi. Matangi emafuta anokwanisika anoiswa akatenderedza peturu mutsetse wakasunganidzwa kune rimwe nerimwe rematangi aya.
Kuti uwane rumwe ruzivo kana rakasiyana dhizaini dhizaini, gamuchira kuti utitumire email rdflexitank@126.comkana kufona pa 86-13589398394! Isu tiri vanopfuura vanofara kukushandira iwe pane yako chaiyo projekiti uye tsvaga dhizaini inokushandira zvakanakira iwe.